Kumaphi amazwe kakhulu othanda ukuphuza ikhofi?
Okusanda, iZizwe Ezihlangene njalo ngonyaka "Human Development Report" esanyatheliswa, okuyinto echazwe lizwe nge izinga lokuphila eliphakeme kakhulu emhlabeni. Kulesi sihloko, sizokhuluma uchaze ukuthi ngamunye phezulu eziyishumi simo uthi izakhamizi bathanda ukuyiphuza ikhofi.
Inombolo ephelele ukuphuza ikhofi lumelele unyaka, kuleli zwe lifaka ingeyesithathu emhlabeni. Uma phambi bendawo ayethanda isiphuzo ngokwesiko ukwenziwa, manje endaweni abokuqala espresso.
Iceland kudle ikhofi in inqwaba. Ngokokuqala ngqá abantu bakulezi ziqhingi wazama lokhu isiphuzo ekuqaleni kwekhulu nesishiyagalombili. Kusukela ngaleso sikhathi, uye waba kuyingxenye yesiko labo kazwelonke, efana imimoya kwamanye amazwe. Uma ayethanda ikhofi ngaphandle caffeine - e-Iceland wena umane abaqondi.
Ireland kubhekwa ukuba "itiye" izwe ngokuyisisekelo, ngoba abantu bakhona ngenani ukusetshenziswa kwalesi isiphuzo kukhona esingesesibili ngobukhulu emhlabeni ngemva abaseTurkey. Kodwa njalo ngonyaka ukusetshenziswa yekhofi isiba kwande, ikakhulukazi ngemva kokutholakala sebuningini ezitolo. Futhi Irish aba phakathi kwabantu bokuqala owaqala sokwenezela ezinkathazweni isiphuzo whiskey, futhi ngokwenza kanjalo walenza ukunambitheka emizweni ezintsha.
Kukhona umqondo ukuthi Dutch nje ikhofi eqinile, i-British - itiye. Ngokwe obungakanani utshwala idliwe isiphuzo izinkomishi capita izakhamizi Tulips kuzwe ngalinye lifaka ingeyesithathu emhlabeni. Ngaphezu kwalokho, ngokuvamile hhayi indlela ebalulekile ekuwulungiseleleni, into esemqoka - ukuwaphuza eziningi futhi ngokuvamile.
E Singapore, uhlobo ethandwa kakhulu yekhofi ubhekwa okwami. Kuyinto amnyama, isiphuzo enamandla egcwele ukuthi incane ebabayo kuka umlingani wakhe Vietnamese. Singaporeans baphuze kuze kube izinkomishi eziyisithupha yekhofi ngosuku, unezela ubisi wafingqa kuwo.
Danes uthande ukuba bahlangane endaweni amathilomu encane ethokomele, lapho ungafunda kabanzi mayelana nomunye phezu inkomishi isiphuzo asanda ukwenziwa.
Ngokocwaningo olwenziwa kwezibalo, amaJalimane baphuze ngonyaka mayelana 150 amalitha ikhofi. Nokho, bakhetha uhlobo enamandla niphuza, noma aphuze espresso. ikhofi encibilikayo kuyinto cishe ingekho.
Abantu bendawo uncamela aphuze eyosiwe ezinhle futhi ikhofi eziqinile. Futhi, Okhahlamba ungathanda ukusebenzisa i-espresso ubisi.
Isiko ukusetshenziswa yalesi siphuzo ethandwa kakhulu emhlabeni, Australia iyizwekazi ezingeni eliphezulu kakhulu. Mhlawumbe ngenxa yalesi sizathu, ngo-2000 ezweni elidume coffee shop uchungechunge "Starbucks" ayikwazanga sizakhele kulelivekati oluhlaza.
Australia uvame ukubizwa ngokuthi "ikhofi snobs". Ngeke uvume ukusebenzisa ikhofi osheshayo. A inkomishi izinga espresso - lokho abakudingayo ngempela.
Izakhamuzi emazweni aseScandinavia kukhona kalula kakhulu ukusetshenziswa ikhofi, eziqala ukukhethwa okusanhlamvu engcono izindlela zokupheka yesimanje nobuchwepheshe ukondla kanye nezethulo.
Norway ubhekwa ethandwa kakhulu isiphuzo obumnyama ezenziwe uhluke kubhontshisi kancane okugazingiwe, okufanele odakiwe ngaphandle ukwengeza ubisi noshukela. Coffee izithasiselo ehlukahlukene babambeke kakhulu kuyaqabukela.
"Soiree" (ikhofi): incazelo, imibono, ukubuyekezwa
Goddess yasePheresiya - Klaudiya Links
Konke mayelana isethi esiyisibopho umshayeli
Njengoba esuselwe okukhiphayo cosine
Umkhosi Venetian: okungcono amafilimu, imiklomelo kanye nemiklomelo. Venice International Film Festival